प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग अवैध नोटको कनेक्सन ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग अवैध नोटको कनेक्सन !
काठमाडौं, २९ चैत । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ डिसेम्बर २०१७ मा ५ सय १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे ।
मोदीले त्यसबेला राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै कालोधन, भ्रष्टाचार र नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्दै ५ सय र १ हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको बताएका थिए । मोदीको उक्त घोषणाले भारतदेखि नेपालसम्मका व्यापारीमा हलचल मच्चियो ।
केही मात्रामा रकम साट्न भ्याएका व्यापारी तथा कालोबजारीले पुराना १ हजार ५ सय दरका नोट सबै साट्न सक्ने अवस्था थिएन । मोदीले रकम साट्न पनि निश्चित मापदण्ड तोकेका थिए ।
नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्डले नेपालमा भएका भारतीय नोट साट्न पहल गर्ने बताएका थिए । नेपालमा भएका केही भारतीय नोट व्यक्तिगत पहलमा साटियो ।
तर सरकारी तवरमा नोट साट्ने सहमति भने अझैसम्म हुन सकेको छैन । त्यसको असर अहिले पनि जारी छ ।
भारतीय पूराना १ हजार र ५ सयका नोटको सम्बन्ध नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडिएको छ ।
घटना १: गत जेठ २ गते भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै भित्र्याइएको १ हजार र ५ सयको अवैध ९८ लाख भारतीय रुपैयाँ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले बरामद गरेको थियो । यसै दिन सिआइबीले तिलगंगाको होटल पाँचथर अगाडिबाट लु २ च १९० नम्बरको सेन्ट्रो कारबाट १ करोड १९ लाख रुपैयाँका भारतीय नोट सहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
घटना २: सिआइबीले नै गत जेठ ८ गते पुराना १ हजार र ५ सयका भारतीय नोटसहित काठमाडौंको बुढानिलकण्ठबाट २ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला प्रहरीले ५० लाख ५० हजार भारतीय नोट फेला पारेको थियो ।
घटना ३: जेठ १९ गते सिआइबीले नै काठमाडौंको महाराजगञ्जबाट भारतीय १ हजार र ५ सयका नोट (१८ लाख ४४ हजार) सहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
घटना ४: महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार १ हजार र ५ सयका झण्डै ५० लाख मुल्य बराबरका भारतीय नोटसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मोरङको कटहरी गाउँपालिका–३ का सुनिल देव बैश्य र नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–५ का चेतबत्रहादुर नेपाली छन् ।
नेपाली माओवादीका पूर्व लडाकु हुन् भने बैश्य कपडा व्यापारी हुन् । पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले विदेशी विनियम ऐन, २०१९ अन्तर्गत कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाउने गरेको छ ।
यी चारैजना घटनाको केनेक्शन भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
जेठमा भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल ल्याइएका नोट र अहिले प्रहरीले बरामद गरेका नोटको केनेक्शन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडिएको परिसरका एक प्रहरीले बताए । जेठमा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालमा भएका भारतीय नोटका बारेमा सम्झौता हुने र लाभ हुने भन्दै तस्करले भारतबाट नोट नेपाल भित्र्याएको सिआइबीले त्यसबेला पनि आशंका गरेका थियो ।
देउवाको गत भदौको पहिलो हप्ता भारत भ्रमणको मिति तय भएसँगै धमाधम भारतीय नोट नेपाल भित्रिएका थिए । झण्डै ५० लाख बरबारको भारतीय नोट सहित बुधबार पक्राउ परेका बैश्य र नेपालीको बयान अनुसार पनि भारतीय नोटको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग रहेको देखिएको हो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै अवैध रुपमा भारतीय नोट भित्रिन सुरु भएको उनीहरुको बयानबाट थाहा भएको छ । भारतीय ठगले नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र नेपालमा रहेका भारतीय नोट साट्न सहमति हुने आश्वासन दिएर ठग्ने गरेको परिसरका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले बताए ।
अहिले पक्राउ गरिएको रकमको सम्बन्ध पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै रहेको प्रहरीको ठम्याई छ ।
निशानामा अनपढ र सोझासिधा
भारतबाट नेपाल भित्रिएका अवैध नोट बजारमा लैजान सोझासिधा नागरिक प्रयोग गरिएको छ । भारतबाटै नेपाल आएर ज्याला मजदुरी गर्ने, फुटपाथमा तरकारी तथा फलफूल बेच्ने र अनपढ नागरिकलाई ठगिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘नेपाल आएर ज्यामी काम गरेको हुन्छ ।
पूराना नोट नचल्ने बारे खासै ज्ञान हुँदैन’ एसएसपी पोखरेलले भने ‘ज्ञान नै भएपनि अहिले चल्न थालिसक्यो । तपाईलाई थाहा रहेनछ भन्दै नेपाली नोटसँग सस्तो दरमा साटेर ठग्नेहरु छन् ।’ नेपाल भित्रिएका ५ सयको भारतीय नोट २५० नेपाली र १ हजार भारतीय नोट ५ सय नेपाली रुपैयाँमा ठगले साट्ने गरेको एसएसपी पोखरेलले बताए । नेपालको पूर्वी तराईमा गोरु किनबेच गर्ने प्रचलन रहेको र गाँउका सोझासिधा किसानसँग पूराना हजार र ५ सयका भारतीय नोट दिएर ठगले गाईवस्तु भारत लाने समेत गरेको पाइएको छ ।
भारतमा भएका अवैध नोट साट्न नपाएपछि कालोबजारी तथा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अवैध रकम नेपाल ल्याएर वैध बनाउन भारतीय ठग लागिपरेको देखिन्छ । त्यसैले बेला बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई फण्डा बनाएर ठगले ठूलो मात्रामा नोट नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । भारतीय तस्करले नेपालीसँगै मिलेरै यसको व्यापार गर्ने गरेका छन् । प्रहरीले यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
नारायण अधिकारीले समाचार दैनिकमा लेखेका छन ।